Dowlada Norway oo ku dhawaaqday tirada Qaxootiga ay soo qaadaneyso Sanadkan.. | Arrimaha Bulshada
Home News Dowlada Norway oo ku dhawaaqday tirada Qaxootiga ay soo qaadaneyso Sanadkan..
Dowlada Norway oo ku dhawaaqday tirada Qaxootiga ay soo qaadaneyso Sanadkan..
Bulsha:- Dowlada norway oo dooneysa in qaab sharci ah qaxootiga looga soo qaado wadamada dhibaatada ka jiraan ayaa ku dhawaaqday tirada qaxootiga ay soo qaadeyso sanadkan.
ilaa 2120 kun oo qaxooti ah ayey ku dhawaaqday Norway in ay soo qaadeyso sanadkan kuwaasi oo qaarkood laga soo qaadayo wadanka ugandha sida ay sheegtay wasiirka socdaalka iyo cadaalada dalkaasi.
ku dhawaad 1000 kun oo qaxooti ah ayey ku shegtay in ay kasoo qaadeyso wadanka Ugandha kuwaasi oo africa kasoo jeeda.
ilaa 700 oo qaxooti kasoo jeeda dalka Suuriya ayaa lagu sheegay in ay kasoo qaadeyso wadanka urdun.
ugu danbeyn 300 boqol oo qaxooti liibiyaan ah ayaa kamid ah dadka sanadkan loo soo qaadanayo dalkaasi norway.
xisbiyada wadankaasi oo ku jiraan KRF iyo Venster ayaa dowlada ku cadaadinaya in ay ku kordhiso ilaa 1000 kun oo qaxooti ah.
Wadanka norway ayaa dhawaan soo jeediyay in qaxootiga yurub imaanaya marka hore kiiskooda lagu soo dhameeyo wadamada ay joogaan kahor inta aysan soo gaarin yurub taasi oo yaren karta qaxootiga imaanaya yurub,